Indlela ukupheka ikhekhe kusukela kwesibindi - iresiphi for ekhaya yokupheka
Phawula ukuthi lo mkhiqizo ewusizo kakhulu, ecebile izinto ezinjalo ezidingekayo ukuze womuntu njengesisekelo isibindi, ngasizathu simbe, akubona bonke uthanda. Kodwa ukusebenzisa kubalulekile, ikakhulukazi izingane nasebekhulile. Indlela yokwenza umkhiqizo sikhange ngokwengeziwe kubantu ezisebenza nomndeni wakho? Zama ukufunda okuthile ebesingakaze entsha, elula futhi esihlwabusayo - ikhekhe kusukela kwesibindi.
Recipe nokupheka ukulandelana
Ngaphambi kokuthi uqale ukupheka ikhekhe of kwesibindi, iresiphi okuyinto sifuna ukwethula kini, zama ukucabanga mayelana izakhiwo kwesibindi.
Tetilwane letehlukene isibindi isezingeni obuhlukahlukene. Inyama yenkomo kanye ingulube kwesibindi esibabayo kungaba ezinzima, futhi inkukhu kanye turkey - emnene futhi kumnandi lichaza ekwakheni ukudla.
Ngakho uma wathenga yenkomo kwesibindi, khona-ke kumelwe kuqala ukulungiselela: Cwilisa ngobisi okwesikhashana, noma emanzini. Ngakho, kwesibindi ngeke kuphela ngomunyu, kodwa sanies (amanzi lishintshwa njalo).
Ngaphandle kwalokho, ngesikhathi kulungiselelwa kwesibindi akubi Friend too, kumele kube ukushisa aphathwe ngokucophelela - siqhubeke ukushisa low ngesikhashana esincane.
Manje sesiyabona ukupheka ikhekhe kusukela kwesibindi. Indlela icacisa ukuthi kule isidlo "shortcakes" ngeke Kugel pancake uyaca hepatic futhi "cream" - futhi imayonnaise ukugcwaliswa. Ekupheleni ikhekhe uzodinga smear imayonnaise ukuhlobisa ngendlela esilindele yakho.
Inkukhu isibindi (1 kg) kuthiwa engahashazanga kahle, ngokucophelela ukuze abone ukuthi gallbladder futhi yokungalungiseleli ndawonye nomunye isibani, at intando kungenziwa isibambo ambalwa clove nesweli;
Slurry okuholela kunalokho engeza 2 amaqanda aluhlaza, 2 wezipuni ufulawa 1 isipuni amazambane isitashi, usawoti, izinongo engeza usawoti, pepper kanye isinongo ukhari;
Beat mass (kungenzeka in a blender) washiya zigcwala imizuzu engu-20;
I-pan kahle ukuthosa (kungesiwo ubukhulu esikhulu kakhulu) Fry crepes hepatic, cool;
Ubilise amaqanda 2 bazigcobe on a grater - amaprotheni ahlukene eceleni izikhupha;
ushizi Hard on a grater grate esihle ngokugcwalisa (cishe 100 g);
Ikhekhe uqala ukwakha kusukela kwesibindi. Recipe inikeza ukuthi Pancake ngamunye kumele kahle agcotshisiwe nge imayonnaise, futhi ukugcwaliswa phakathi laphakathi ibekwa ukulandelana elandelayo: isikhuphasha, amaqanda, ushizi, amaqanda isikhuphasha, amaprotheni, njll;
Manje ukusakaza nge imayonnaise uhlobise ikhekhe siphelile kusukela kwesibindi.
Indlela kungaba ushintsho oluncane. Ngokwesibonelo, kungenzeka nje kuphela Fry anyanisi, izaqathe kodwa futhi, futhi esikhundleni amaqanda njengoba ofakwe basebenzisa ingxube lezi imifino.
Hlobisa ikhekhe nge izimbali kungaba izaqathe abilisiwe amahlamvu iparsley ohlangothini indawo - lisikiwe anyanisi oluhlaza.
Roll kwesibindi - iresiphi kuyinto Ungadla limnandi
Nge izithako efanayo, ungalungisa roll kwesibindi.
Lungiselela isibindi (1 kg) njengoba kuchaziwe ngenhla. Uthathe izingcezu ezincane.
Ibhotela (100 g) gazinga isibani amaminithi awu 5.
Grate eyodwa isanqante enkulu futhi Fry it ne anyanisi amaminithi ambalwa.
Beka tincetu isibindi kuya pan ne anyanisi kanye izaqathe, engeza usawoti, engeza pepper, amboze uvalwe ngesivalo kanye ibila kuze isibindi okuphekiwe.
Faka ukudla esiqandisini zonke futhi kabili yokungalungiseleli.
Engeza ibhotela (150 g) uphehle.
Esikhunjeni esithambile ukubola mass ngesimo isikwele, ezingeni.
Oku-kuphekwe amaqanda (5 PC.), Grate noma nquma. Engeza ukhilimu ushizi noma ukhilimu soft ushizi (150 g), amakinati, kanye walnuts (ochotshoziwe), imayonnaise uhlanganise ukugxusha.
Mboza isisindo ukugxusha isibindi futhi ngobumnene kakhulu phinda nge isikhumba roll.
Shiya isinkwa esiqandisini 4 amahora.
Sika ngommese obukhali ukusika a la Carte.
Ulungise isidlo enempilo kakhulu ukuthi nakanjani ukujabulela obathandayo.
Zingaki kilojoule okroshka ku kvass? Ulahlekelwe isisindo ngokukhalipha
Bulgarian ukhukhamba zifakwe emanzini anosawoti: zokupheka
Millet iphalishi nge ithanga, ubisi: zonke izimfihlo ukupheka
Kanjani futhi kangakanani ukupheka pearl ibhali
Umlenze Bhaka wewundlu in ucwecwe
Sudak, cypress alley - indawo kokuhlala ezimnandi
Yini ngempela eholela ekuguqulweni kwesimo sezulu: imisebenzi yomuntu noma ukuqhuma kwentaba-mlilo?
Transmogrification paladin e WoW